ရလာဒ်ကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွေဖြစ်ဖို့ ကျင့်သုံးသင့်တဲ့နည်းလမ်း (၄) ခု - Better Version
September 24, 2021 2021-09-24 11:51
အစည်းအဝေးပြီးတိုင်း ဘာရလာဒ်မှမထွက်ဘူးဆိုတာမျိုး ကြုံနေရတယ်ဆိုရင် ဒီ နည်းလမ်း လေးခု ကို သုံးကြည့်ပါ။
အစည်းအဝေးတိုင်းက ရလာဒ်ကောင်းထွက်နေရဲ့လား အချိန်တွေဖြုန်း၊ လိုရင်းမရောက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်သလို တချို့ အစည်းအဝေးတွေက တက်ရောက်တဲ့လူတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေကိုပါ စိတ်ဓာတ်ကျစေတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တစ်ပတ်တစ်ခါပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်လတစ်ခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ဆက်ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ၊ လုပ်ငန်းက ဘယ်အနေအထားကို ရောက်နေပြီလဲ၊ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေရှိနေလဲ စသည် ဖြင့် meeting တွေလုပ်၊ အစည်းအဝေးတွေ ထိုင်ကြပြီး ရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေကြတော့ Meeting တွေဟာ သင့်အဖွဲ့ထဲက လူတွေ အတွက် အချိန်ကုန်တယ်လို့ တွေးကြတဲ့အရာတွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းတတ်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Meeting တွေသာ လုပ်လိုက်တယ် ဘာမှ ဆက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကောင်းတဲ့ Meeting တွေ ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း သင့်အဖွဲ့သားတွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့၊ အတွေးအမြင်တွေကို ကိုယ်မြင်တဲ့ ရှု့ဒေါင့်ကလေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မျှဝေ ကြဖို့၊ တိကျတဲ့ action plan တွေ control တွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှဘဲ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိမှာပါ။
ဒါဆိုရင် ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်ဖို့ meeting တွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး အချက်တွေကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးသင့်လဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
1. Meeting ချိန်တွေကို ကြောက်နေတာမျိုး မဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Meeting ချိန်တွေမှာဆိုရင် သင့်အဖွဲ့သားတွေထဲက ဘယ်လို လူမျိုးတွေက သက်တောင့် သက်သာ မဖြစ်ဘူးလဲ အကဲခတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ extroverts များနေတဲ့ team ထဲကိုရောက်လာတဲ့ introverts လေးတွေဆိုရင် သူတို့အတွက် Meeting ချိန်တွေက challenge တစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ဆွေးနွေးရတာကြောက်နေတတ်တာမျိုး၊ ငါပြောလို့ မှားသွားရင် အလှောင်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Meeting အစထဲက အားလုံးနွေးထွေးစွာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းနဲ့ ရှု့ဒေါင့် အမျိုးမျိုးက လာတဲ့ idea အသစ်တွေကို ပွင့်လင်းစွာ တင်ပြနိုင်ကြောင်း အဖွဲ့သားတွေကို တစ်ခါထဲ နားလည် လက်ခံနေပါစေ​။ ဒါမှပဲ အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်ထိ‌ရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. အားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါ။
Meeting တက်ရောက်သူတိုင်း၊ ဒါမှ မဟုတ်လုပ်ငန်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ project ကိုစီမံနေရသူတိုင်းပါဝင် ဆွေးနွေးကြဖို့ အခြေအနေတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Meeting မစခင်ထဲက ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတဲ့ (agenda)ကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲက လူတွေကို ၂၄ နာရီအလိုထဲက ဒီအချိန် ကနေ ဒီအချိန်မှာ Meeting ရှိမယ်။ ဘာတွေတင်ပြချင်တာ၊ ဆွေးနွေးချင်တာ ရှိလဲ ဆိုတာကို အရင်မေးပြီး သင်ကစီစဉ်ရသူဆိုရင် သင့်ရဲ့ agenda မှာတစ်ခါထဲ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ တာမျိုး လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဒီ agenda ရယ် ကြာနိုင်တဲ့ အချိန်ရယ်ကို တစ်ခါထဲ Meeting တက်ရမယ့် လူတွေ အားလုံးကို မျှဝေပေးထားဖို့လိုပါတယ်။
စီစဉ်ရသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ဆိုရင် မစခင်ထဲက တစ်ခါထဲ ဘယ်သူတက်မှာလဲ၊ ဘယ်သူက မလာနိုင်ဘူးလဲ၊ မလာနိုင်တဲ့သူအတွက် notes (မှတ်စု) ရေးပြီးဖတ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားမှာလား၊ video recording ပို့ပေးမှာလား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့လည်းMeeting မတက်နိုင်ပေမယ့် နားထောင်ပြီး သူတို့ ထင်မြင်ချက်တွေကို နောက်Meeting တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေ လို့ရသွားတာပေါ့။
3. တာဝန်ကို အလှည့်ကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ခွဲဝေပေးထားပါ။
Meeting တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ facilitator (meeting ကြီးကြပ်သူ)၊ timekeeper (အချိန်ကြီးကြပ်သူ)၊ note taker (မှတ်စုရေးသူ) စသည်ဖြင့် ကြိုတင်ပြီး အလုပ်တွေ ခွဲဝေ assign ချထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီတစ်ခါ အဖွဲ့ထဲက စီနီယာ တစ်ယောက်က facilitator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အငယ်ဆုံး ဂျူနီယာက note taker အဖြစ်လုပ်ရင် နောက်တစ်ခါဆို ဂျူနီယာထဲက တစ်ယောက်ကို facilitator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းကိုလည်း အကဲခတ်နိုင်မယ်၊ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပံ့ပိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီလိုမျိုး တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ တာဝန်တစ်ခုစီကိုအလှည့်ကျထားပေးထားတာ ကြောင့်လည်း သူတို့တွေအတွက် meeting မှာ အရေးပါတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ခံစားမိပြီး တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေး ကြဖို့တွန်းအားပိုဖြစ်စေပါတယ်။
4. Meeting ပြီးတော့ ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း အားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် မျှဝေပေးပါ။
Meeting တွေရဲ့ အသက်က နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်အချက်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုလဲ ဘာတွ​ဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ( action and control plan) ပါ။ meeting တော့လုပ်လိုက်တယ်၊ အဖွဲ့ထဲက လူတွေ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြီးရင်ဘာမှ ဆက်ဖြစ်မလာဘူးဆိုလည်း ဒါဟာ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီMeeting မှာ ဘာတွေကို ဆွေးနွေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချလိုက်တယ်။ ဘယ်သူကတော့ ဘာတာဝန်ကို ယူဖို့ လိုတယ် စသည်ဖြင့် action plan ကိုတစ်ခါထဲဆွဲပြီး အားလုံးမြင်သာအောင် ဖြန့်ဝေပေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ သင့်အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့လည်း သူတို့ရဲ့ feedback တွေ တင်ပြချက်တွေကို ဘယ်လိုမျိုး action ယူဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မြင်ရတဲ့အခါ သူတို့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ပိုမို တက်တက်ကြွကြွ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေပါတယ်။
တကယ်လို့များ တစ်ခါထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုး တွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း Meeting အစထဲက ဒီ project အတွက် အားလုံးရဲ့ တင်ပြချက်ကို လိုအပ်တယ်။ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါ။ ပြီးရင် ဒါတွေအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဘယ်အချိန်မှာတော့ final decision ကိုချမယ် ဆိုမျိုး တစ်ခါထဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
Meeting တွေမှာ အဖွဲ့သားတွေအားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးကြစေဖို့၊ မတူကွဲပြားတဲ့ အတွေးအမြင်တွေပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်ဖို့၊ ရလဒ်ကောင်းတဲ့ meeting တွေ ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေ သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
#betterversion #morethanyouthink #makeyourprogress #effectivemeeting